मतदान सकियो, अब के हुन्छ? यस्तो छ मतगणना सुरु हुनुअघिसम्मका प्रक्रिया :: PahiloPost
मतदान सकियो, अब के हुन्छ? यस्तो छ मतगणना सुरु हुनुअघिसम्मका प्रक्रिया
काठमाडौँ : दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत ४५ जिल्लामा साँझ ५ बजे मतदान सकिएको छ। मत
मतदान सकिएपछि के के हुन्छ त?
मतपेटिकासँगै आउन सक्ने
मतपेटिका र मतदान सामग्री बुझाई भरपाई लिने
मतपेटिका बन्द गरेको बिर्कोको सुरक्षणसिल चुँडिएमा
मतदान सकियो, अब के हुन्छ? यस्तो छ मतगणना सुरु हुनुअघिसम्मका प्रक्रिया को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।